Global Voices teny Malagasy » Nandroso lalàna hiarovana ny biby mirenireny i Costa Rica · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2012 2:45 GMT 1	 · Mpanoratra Jenny Cascante Gonzalez Nandika Lila
Sokajy: Amerika Latina, Costa Rica, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana
Tamin'ny 10 oktobra lasa teo dia nanao sonia  ny lalàna momba ny fanaraha-maso hentitra ny vombon'atsantsa  ao anatin'ny fari-dranomasin'i Costa Rica ny filoha Laura Chinchilla.
Tamim-pifaliana no nandraisana ny vaovao teo amin'ny vondrona miaro ny tontolo iainanana sy ny fikambanana tsy miankina ary olom-pirenena an-jatony maro izay efa nandefa taratasy maromaro any amin'ny Fanjakana Mpanatanteraka hanajanonana ity fomba ratsy ity. Toy ny nalefan'i Carol Corrales tao amin'ny Rainforest Radio  [es]:
Nahitana fanehoan-kevitra mikasika ny fanaovana sonia ka nahazoan'ny filoha tombony ao amin'ny twitter mampiasa ny rohy #NOALALETEO  (“Tsy ekena ny fangalana vombo”). Anisan'ireny i Marianela Castro (@necascru ) [es] :
@necascru : #noalaleteo  Tsy misy indrafo ho an'ny mpaka vombo! Tokony hampiharina ny lalàna! Ho ela velona anie ny hazandranomasina aty amintsika! Hiaina an-kalalahana ireo zavaboary! #CR 
Fa tsy izay ihany no vaovao mahafinaritra eo amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny mponina any Costa Rica. Tamin'ny 2 oktobra, nankatoavin'ny mpanao lalàna ny volavolan-dalàna hiarovana ny tontolo iainana naroson'ny mpanatanteraka teo anoloan'izy ireo, lalàna mandroso hevitra hanafoanana ny fanatanjahan-tena mihaza any an-toerana. Vatsian'ny Fikambanana miaro ny Tontolo Iainana (Aprelofas ) vola ity tetik'asa ity ary raha ankatoavina mandritra ny fivoriana ady hevitra faharoa dia i Costa Rica no ho firenena voalohany any Amerika Latina hanasazy izay manao io fanatanjahan-tena mihaza io.
Ny bilaogy “Generación Rebelde ” (Taranaka mpioko) [es] nitantara ny zava-misy ho toy ny “lalao iray ho an'ny biby mpirenireny ” [es] ary faranany amin'ny hafatra hoe:
Nahazo fanankianana mafy kosa ireo mpikambana ao amin'ny kongresy nitsipaka iny lalàna iny. Susan nanoratra ao amin'ny Maecr’s blog  [es]:
Afaka arahanao ao amin'ny rohy #LeydeVidaSilvestre  [es] (Lalàn'ny biby mpirenireny) ny mikasika ilay lalàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/18/39209/
 nanao sonia: http://www.ticotimes.net/Current-Edition/News-Briefs/Costa-Rica-bans-shark-finning_Wednesday-October-10-2012
 lalao iray ho an'ny biby mpirenireny: http://generacionrebelde-roncahuita.blogspot.com/2012/10/nuestra-fauna-silvestre-esta-de-fiesta.html
 Maecr’s blog: http://www.maecr.com/blog/actualidad/vuelta-la-creacion-con-la-asamblea-legislativa?page=2